"Facebook က အသစ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ Messenger Room ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ???" ~ Myanmar Online News
"Facebook က အသစ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ Messenger Room ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ???"
8:44 AM နည်းပညာ No comments
Facebook ကတော့ Zoom နဲ့ Houseparty တို့လို နာမည်ကြီး Video-conferencing service တွေကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ Video-conferencing service အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
လက်ရှိ အားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ Coronavirus Pandemic ကာလအတွင်း စည်း‌​ဝေး တွေ့ဆုံ ပြောဆို ဆက်သွယ်မှု‌‌တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်ချက်ရှိလာခဲ့မှုက Video Conferencing Service တွေ အသုံးပြုမှုနှုန်းကို ထူးထူးခြားခြားကို မြင့်တက်လာ‌စေခဲ့တာပါ။
အခု Facebook က ဖန်တီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Messenger Room ဟာ အသုံးပြုချိန် အကန့်အသတ်မသတ်မှတ်ထားသလို Video Conference တစ်ခုအတွင်း လူဦးရေ ၅၀ ထိ ပါဝင်ခွင့်‌ပေးထားတဲ့အတွက် Zoom နဲ့ Houseparty တို့လို့ နာမည်ရှိပြီး Service ‌တွေကို အခက်တွေ့ လာစေမှာပါ။
Messenger Room တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်
- Facebook မှာ Logged in လုပ်ထားတဲ့ user တိုင်းဟာ Rooms section ကို status bar ရဲ့အောက်ဘက်မှာတွေ့ရမှာ
- Create to start ကိုနှိပ်ပြီးရင် ဒါမှမဟုတ် ရှိနေတဲ့ Room video call တစ်ခုမှာသွားရောက်ချိတ်ဆက်ပါဝင်ပြီးရင် Room ကိုစအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
- Room ရဲ့ Purpose ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်‌ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ရသလို Facebook က သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ "Happy Hour” or “Here All Day.” တို့ထဲကတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
- Room ကို public /private သတ်မှတ်ဖို့အတွက် Who is Invited section ထဲမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Invite all your friends ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဖိတ်ခေါ်ခံရသူအားလုံးရဲ့ Facebook Homepage ရဲ့အပေါ်ဘက်နားမှာ Room Notification လေးပေါ်‌‌နေမှာပါ။ Invite Specific Friends ဆိုတဲ့ button ကတော့ Room ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရှိတဲ့ Friend တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Groups or Event တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ Room ကို Group member တွေပါဝင်ချိတ်ဆက်ဖို့ Option ‌ပေးထားတဲ့ Post တစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Messenger Rooms ကို Facebook Messenger appမှာသုံးမယ်ဆိုရင်
- Facebook Messenger ကိုဖွင့်ပြီးရင် အောက်ခြေညာဘက်‌ထောင့်‌နေရာက People tab ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် CreateaRoom ကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Room မှာ ကိုယ်ချိတ်ဆက်ပါဝင်‌စေချင်သူတွေဆီဖိတ်ခေါ်မှု‌‌ပေးပို့ဖို့အတွက် Share Link Button ကိုသုံးမှာပါ။ ဘယ်လို Device အမျိုးအစားနဲ့မဆို Room မှာပါဝင်ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Facebook Account မရှိသူတွေအနေနဲ့လည်း လက်ခံရရှိတဲ့ share link ကိုနှိပ်ရုံနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Video Confrence တစ်ခုပြုလုပ်နေစဉ် လူသစ်‌ချိတ်ဆက်ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်သမျှကို Conference ဖန်တီးသူတစ်ဦးတည်းကပဲ ထိန်းချုပ်သတ်မှတ်ခွင့်ရှိမယ့် Feature ပါဝင်မှုက‌တော့ လုံခြုံရေးပိုင်းပြဿနာ‌တွေကြားနစ်နေတဲ့ Zoom အတွက်အရှိုက်ထိ‌စေတဲ့ Feature ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Room တစ်ခုဟာ Facebook ရဲ့ community standard တွေကို ချိုး‌ဖောက်‌‌နေတယ်လို့‌တွေ့လာရင် ဘယ်သူမဆို Facebookဆီ ချက်ချင်း report တင်နိုင်ပြီး Room ထဲက Video or Audio ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု‌ဆိုတာမျိုး ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်သလို ကြော်ငြာကိစ္စတွေအတွက် အသုံးချသွားမှာမဟုတ်‌ကြောင်းလည်း Facebook ကကြေညာထားပါတယ်။